nan Thu Dec 09, 03:37:00 PM GMT+8
ကဗျာလေး ဖတ်သွားတယ် အမရေ.....
“အပေါ်ယံ အမြင်လှဖို့ သက်သက်
ခွန်မြလှိုင် Thu Dec 09, 05:29:00 PM GMT+8
ခံစားချက်တွေ ထပ်တူကျသွားတယ်... အပေါ်ယံ အမြင်လှဖို့အတွက် အထဲမှာ ကြေမွခံရတာတွေ တန်မတန် ဆန်းစစ်မိနေတယ် အမရေ။
ညီမလေး Thu Dec 09, 06:07:00 PM GMT+8
မိုက်တယ်ကွာ ချစ်ချစ် .... အရမ်းကို ကြိုက်တယ်။ တိတိကျကျ လဲ ခံစားလိုက်တယ် ။
ကဗျာရေးသူကော ၊ ပန်းချီဆွဲသူကော ၊ဘောင်ခတ်သူကော အမှတ်ပြည့်ပေးတယ်း))
Anonymous Thu Dec 09, 06:36:00 PM GMT+8
ထိတယ် ဘယ်ဘက်ရင်အုံတည့်တည့်း)
sosegado Thu Dec 09, 07:44:00 PM GMT+8
နာကျည်းသံရောနေတဲ့ ကဗျာလေးကို ခံစားသွားပါတယ်။
ချစ်ကြည်အေး Thu Dec 09, 09:34:00 PM GMT+8
နတ်သမီးရေ ကျေးဇူးပါ ညီမလေး...:)
ညီမ ခွန် ခံစားချက်တွေ ထပ်တူကျလို့ ဝမ်းသာပါရဲ့ :)
ညီမလေး...မိုက်ရမယ်လေကွာ...ဟဲ ဟဲ :D
ကိုတည်ငြိမ်...အဓိပ္ပါယ်က ကြိုးဆွဲရာကဖို့ ခွင့်ပြုမိန့် လိုင်စင် ရထားသော အရုပ်တဲ့....:)
MrDBA Thu Dec 09, 10:51:00 PM GMT+8
ဘောင်ကျမှ အစ်မသက်ဝေကို သွားခတ်ခိုင်းရတာတုန်း။ သူကအမြဲဘောင်ခတ်သူလား??
မောင်ဘကြိုင် Fri Dec 10, 01:40:00 AM GMT+8
း) ကဗျာက မော်လ်ဒန်လားပဲ ဖတ်ပြီးမောတယ် အစ်မရေ
း) စာမျက်နှာတွေက အရောင်တွေစုံစုံလာတယ်ဗျား)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Fri Dec 10, 03:05:00 AM GMT+8
ခု... နှစ်ပါးသွားနဲ့ မိုးလင်းတာ...ငိုချင်းချတာ မပါတာကြာပေါ့..ဘုရင်မကြီးရာ.....
ကွင်း အလဲ့ စပယ် ...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Fri Dec 10, 03:08:00 AM GMT+8
စာရေးကောင်းသလို ကဗျာရေးလဲ ကောင်းတယ်.. အဲ ပုံဆွဲလည်းကောင်းသေးတယ်နော်
ဟုတ်တယ်နော်.. အပေါ်ယံသက်သက်အလှအတွက်တော့ ဆေးမခြယ်တာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ..
သက်ဝေ Fri Dec 10, 09:06:00 AM GMT+8
ရက်လွန်နေတဲ့ အချစ်လို့ အမည်မတပ်ပါနဲ့လေ...
အချစ်မှာ ရက်လွန်တယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး...
Anonymous Fri Dec 10, 09:41:00 AM GMT+8
Helo, Mama Chitkyi,
I love your sketchalot as well.
B/rgds and love <3
An Asian Tour Operator Fri Dec 10, 10:12:00 AM GMT+8
ရက်လွန် နေတဲ့ အချစ်???
မြူးမြူး Fri Dec 10, 11:18:00 AM GMT+8
ကဗျာလေးက အရမ်းမိုက်တယ်.. :)
မောင်ကောင်း Fri Dec 10, 03:25:00 PM GMT+8
စိတ်ညစ်နေချိန်နဲ့ ကဗျာနဲ့တော့ ကွက်တိပဲအမရေ.....အပေါ်ယံ အမြင်လှဖို့ သက်သက်
ငါ့စာမျက်နှာတွေကို ဆေးခြယ်မနေချင်တော့ဘူး... တကယ်ကိုဆေးခြယ်မနေချင်တော့ပါဘူး ... :)
Anonymous Fri Dec 10, 04:40:00 PM GMT+8
expiredဖြစ်နေတဲ့ ပေါင်မုန့်တလုံးလိုပေါ့ဗျာ မလတ်ဆတ်တော့ဘူး မသစ်လွင်တော့ဘူး ရက်လွန်နေတဲ့ အချစ်ဟာ ရင်ခုန်သံတွေ မနွေးထွေးနိူင်တော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်တယ်နော် အမချစ် အမကိုယ်စား ဘာသာပြန်သွားတယ် :D
မောင်လေး Fri Dec 10, 08:27:00 PM GMT+8
အင်္ဂါဟူး Fri Dec 10, 09:02:00 PM GMT+8
၀ုတ်ပ ၀ုတ်ပ... ဆေးခြယ်တော့ ပိုက်ဆံကုန်တာပေါ့... စိတ်ဖြူရင် ရုပ်ကြည်မယ် ထင်တာပ...
pandora Fri Dec 10, 09:46:00 PM GMT+8
ပုံထဲက ကြိုးလေးတွေ လှတယ်။ ကဗျာလေးလည်းလှပါတယ်။ ခံစားမှုတွေကတော့ နင့်နင့်နဲနဲပါလား။
SHWE ZIN U Sat Dec 11, 12:52:00 PM GMT+8
အင်ကြင်းသန့် Sat Dec 11, 06:16:00 PM GMT+8
ကဗျာက မာန်တွေအပြည့်နဲ့ပါလား အစ်မချစ်ရေ....
rose of sharon Mon Dec 13, 07:18:00 AM GMT+8
ကဗျာ အမိုက်စားလေး လာဖတ်သွားတယ် :)
Soe Yu Sat Dec 18, 06:41:00 PM GMT+8